बिस्टन चर्चिलले भनेका छन्ः ‘निराशावादीले हरेक अवसरमा कठिनाई देख्दछ, तर आशावादीले हरेक कठिनाईमा अवसर देख्दछ ।’ चर्चिलको यो भनाइजति मनोवैज्ञानिक छ, त्यत्ति नै सत्य पनि छ । त्यसैले जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि आशावादी दृष्टिकोण तथा सकारात्मक सोच राख्नु हरेक मानिसका लागि ज्यादै आवश्यक छ । तर सकारात्मक सोंच तथा विश्वास जतिसुकै शुभसंकल्पका लागि भएपनि त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । तथ्यहीन विश्वासबाट सफलता प्राप्त हुदैन ।
तथ्यहीन विश्वास त विश्वास नै होइन, अन्धविश्वास हो । जस्तोकि अखण्ड भजनकीर्तन गरेर वा हरहर महादेव पानी देऊ भनेर पानी पर्दैन, पानी कसरी पर्छ भन्नेकुरा अब धेरैलाई थाहा छ । इन्द्र रिसाएर वा भ्यागुतो नकराएर खडेरी पर्दैन, बाक्लो रूपमा वन–जंगल फ“डानी ह“ुदै गयो भने खडेरीपर्छ । त्यसैले खडेरीबाट बच्न भजनकीर्तनको ठाउ“मा वन–जंगल फ“डानी रोक्नुपर्छ, प्रशस्त रूखविरुवाहरू रोप्नुपर्छ । माथि आकाशमा पानी लिएर इन्द्र बसेका छन्, उनले नै पानी बर्साउ“छन् भन्नेजस्ता तथ्यहीन कुरामा विश्वास गरेर सोचले सकारात्मक काम गर्दैन ।
हो, मानिसको जीवनमा सोचको ज्यादै ठूलो महत्व छ । महात्मा बुद्धले भनेका नै छन्, जस्तो सोच्चौ“ तिमी त्यस्तै हुन्छौ“ । यो वैज्ञानिक तथ्य हो । प्रसिद्ध मनोचिकित्सक आरुन बेकको कग्निटिव मोडलका अनुसार डिप्रेसनको प्रमुख कारण भनेको नै मानिसको सोच हो । यस मोडलका अनुसार नकारात्मक र अतार्तीक सोचले नै डिप्रेसन लगायतका मानसिक रोगहरू पैदा गर्छ ।
सोच अर्थात् विचारको उद्गम स्थल मस्तिष्क हो । विचारको प्रभाव पनि सबैभन्दा बढी मस्तिष्कमा नै पर्दछ, अनि मस्तिष्कमार्फत् सम्पÒर्ण शरीरमा पर्दछ । वैज्ञानिकरूपमा नै प्रमाणित भएको छ कि जब मानिसको मनमा विचार उत्पन्न हुन्छ, तब मस्तिष्कमा रासायनिक क्रिया तथा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा विचारस“ग सम्बन्धित रसायन सक्रिय हुन्छन् । न्युरोपेप्टाइड केवल मस्तिष्कमा मात्र हु“दैन, शरीरभरि नै रहन्छ, पेट, मिर्गौला तथा कलेजो लगायतका अंगहरूमा पनि यसको उपस्थिति हुन्छ । यसैकारणले नै विचारले मानिसको शरीरिक ढाचा तथा रङ्गढंग पनि निर्धारित गर्ने गर्दछ । मानिसको मस्तिष्कमा सयौ“ प्रकारका स्नायु रसायनहरू छन्, ती मध्ये सेरोटोनिन, नोरएपीनेफ्रीन तथा डोपामीन, यी तीन प्रसन्न पैदा गर्ने रसायनहरू हुन् । यिनै रसायनहरूमा नै मानिसको आनन्द, खुसी तथा प्रसनन्ता टिकेको हुन्छ । यदि यी रसायनहरूले ठीक काम गरेनन् भने मानिस खुसी र प्रसन्न रहन सक्दैन, जसले गर्दा अनिद्रा, चिन्ता तथा डिप्रेशन हुने गर्दछ । त्यसैले त भनिएको नै छ शुभ विचार तथा शुभ संकल्प शक्तिले नै मानिसलाई महान् बनाउ“छ ।
सोंचका दुई रूप हुन्छन् अर्थात् सोंच दुई किसिमका हुन्छन् । सकारात्मक सोंच तथा नकारात्मक सोंच । यसलाई राम्रो र नराम्रो सोंच भन्न सकिन्छ, असल र खराव सोंच वा शुभ र अशुभ सोंच पनि भन्न सकिन्छ । सोंचको बुभ्mनै पर्ने मनोविज्ञान के हो भने मानिसको मन–मस्तिष्कलगायत सम्पÒर्ण शरीरमा राम्रा विचारको प्रभाव सधै“ राम्रो पर्दछ र नराम्रो विचारको प्रभाव सधै“ नराम्रो नै पर्दछ । मानिसको सोंच तथा दृष्टिकोणलाई विभिन्न तत्वहरूले प्रभाव पार्दछन् । त्यसैले यस्ता तत्वहरूले नै मानिसको सोंच र दृष्टिकोण निर्धारण गर्दछन् । मानिसको सोच र दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने केही प्रमुख तत्वहरू यसप्रकार छन्ः पैत्रिक गुण । अनुभव । वातावरण । स्वःसूचना तथा शिक्षा । यी यावत् कुुराहरूद्वारा नै मानिसको सोंच तथा दृष्टिकोण बन्ने गर्दछ । तर मानिसले चाहेको खण्डमा आफ्नो सोंच र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ ।
हिजोआज मनोविज्ञानले धेरै नै प्रगति गरेको छ । रुखरूपी मनोविज्ञानले थुप्रै नया“–नया“ हा“गाबि“गाहरू हालेको छ । यस्तै भर्खर–भर्खर पलाएको नया“ कलकलाउ“दो हा“गा हो, सकारात्मक मनोविज्ञान । शाब्दिक अर्थमा मानव जीवनको सकारात्मक पक्षहरू जस्तैः खुसी, आनन्द तथा आरोग्यता आदिको विज्ञान नै सकारात्मक मनोविज्ञान हो । यो मानिसको सकारात्मक आचार–विचारको मनोविज्ञान हो । यो मनोविज्ञानले मानिसलाई आफ्नो सोंच र जीवनशैली सकारात्मक राखेर कसरी आरोग्य तथा सार्थक जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउ“छ । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रा. डा. मार्टिन सेलिगमैन सकारात्मक मनोविज्ञानका सर्जक हुन् ।
हो, सकारात्मक सोंचमा अद्भूत शक्ति हुन्छ । सकारात्मक साेंचका कारण नै मानिस स्वस्थ, शिक्षित र समृद्ध बन्न सक्छ । सकारात्मक सोंच राख्नेले नै आफूले देखेको सपना पूरा गर्न सक्दछ । तर यहा“ बुझ्नु पर्ने कुरा के भने हुर्किएको आगो निभाउन सकारात्मक सोच राखेर मात्र हु“दैन, हुर्किएको आगोमा पानी हाल्नुपर्छ ।
एक दिन त आगो निभ्नेछ भनेर सकारात्मक सोंच राख्दा के हुन्छ, थाहा छ ? एक दिन आगो त निभ्नेछ, तर सबकुछ खरानी भएपछि मात्र आगो निभ्ने छ ।
(लेखक मनोविद् हुन् ।)
दैनिक पत्र संवाददाता /सोमवार, कार्तिक १, २०७३